Home Wararka Quraajooy Ku Quuso: Maanta ha kuu Caddaato waa Kuma RW Rooble yuusa...
Quraajooy Ku Quuso: Maanta ha kuu Caddaato waa Kuma RW Rooble yuusa u shaqeeyeaa
Rooble waa caddeystay inuu yahay wakiil Farmajo oo uu sameynayo wax kasta oo ay rabaan, Waxaana la rabaa maanta inay ku tala qaataan shacbiga iyo Midowga murashixiinta inuu Rooble yahay khatar ula siman dalkaan Fahad iyo Farmajo oo ay khasab tahay in laga qabto oo kalsoonida lagala noqdo.
Seddex qodob ayuu isla soo taagay RW Rooble markii la magacaabay, oo uu been cad Masada
Inuu caddaalad uu u raadinayo Kiiska Walaasheen Ikran Tahlil Farax.
Inuu dalka doorasho lagu heshiis yahay oo degdeg ah ka qaban doono.
In Amaanka Caasimadda uu sugi doono.
Haddaba qof walb sow uma cadda inuu ujeedadiisu ahay inuu qodobadaan u isticmaalayey inuu Farmajo iyo Fahad kaga dulqaado naceybka Meesha ka saari lahaa, waqtigaan ka hor labadooda haddii aanu soo dhexgeli lahayn oo uusan shacbiga iyo Murashaxiinta isugu simi lahaa?
Rooble qodobaan waxaa uu ugu talagalay inuu ku helo:
magac, kaas oo uu ku kasbaday is dabbaalintii uu maalmo nagu waday iyo caddalad doon oo uusan ahayn.
Lacag oo maanta yahay milyoneer waxbadan muddo gaaban ku urursady.
Inuu yahay shakhsi ay wax kale oo xanuun badan ay ka iman doonaan haddaan hadda la iska qaban.
Waxaa caawa si cad uu u soo muujiyey caddaaladda uu Ikraan u raadinayey waxa ay ahayd iyo halka uu la rabay oo ay maanta soo gaartay.
RW Rooble Wuxuu caawa nala hor yimid:
Fahad, Yasiin Farey, Wadna-qabad waa dembi laawayaal.
Ikraan cadaaladeeda iyo Meesha ay ka baxday annagu ma ogin oo ciddii lagu ogaa waa iska diidday.
Waa in dembi loo qabsadaa ciddii soo gudbisay galdacwadeedka oo iyaga dib loo baaraa.
Haddaba Somaliyey Dalkeennu waa kaas oo halkaas ayuu ku socdaa inta cunugtaada oo aad ku dadaashay inay qarankan anfacdo, kaana qaadatay oo nafteeda u khater gelisay qarankan maanta inta lagu dhex dilo xaruuntii NBAD-SUGIDDA qaranka, haddana ciddii dishay la yiraahdo waa nala shaqeysay waana ceeb ka saliim.
Waxaan oo dhan waxa loo sameynayaa waa in Yasiin Farey Waceysle Xildhibaan looga dhigo, Fahadna reer Awxasan xildhibaan looga dhigo, kadibna naloo sheego raggaan lama xeri karo oo lama maxkamdeyn karo waxay leeyihiin Xasaanad.
Dhinaca kale Xeer Ilaaliye Kamey ma is dambiyeeyey isagoo og inuu been sheegayo misa waa isu cabsaday oo loo sheegay inuu Cabdicasiis Afrika ku biiri doono uu xararka kor usoo fiirin doono? Waa su’aalaha la is weydiinayo oo jawaab uga baahan inuu ka bixiyo arintaan, taas oo aakhirana la hortagi doono Allah Cazawajjah.
Runtii waraaqdaan caawa ka soo baxday xeer ilaalinta ciidamada waxay u egtahay halkii ay fadasha kacdoonka ka bilaaban lahayd , haddii aysan ka bilaabanna waa halkii ay xurriyadeennu ku dhamaan lahayd oo halka uu abwaan Guure ka leeyahay :AFRIKAYA IKAARAANIYO ELMAN IYO ALMAAS IYO AXMED IYO GALAALIYO AQOONYAHANKI GOBOLKIYO INJINEERKI YAA DILAY?